အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ ဖိုရမ် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်၌ ပြုလုပ်မည် - Yangon Media Group
ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ခတိုးမြှင့်သတ်မှတ်နိုင်ရေး အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ဖိုရမ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၃ရက်တွင် ရန်ကုန်၌ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါဖိုရမ်ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ချက်ထရီယံဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကာ ပညာရှင်များ၊ အလုပ်ရှင်များ၊ အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်များ၊ ILO ၊ လွှတ်တော် ၊ CSO များ စသည်တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အနည်းဆုံးအခ ကြေးငွေသတ်မှတ်ရေး အမျိုးသားကော်မတီမှ သိရသည်။
”အားလုံးပါဝင်တဲ့ ဖိုရမ်ပါ။ အရင်ကဆိုရင် CSO တွေမဖိတ်ဘူး။ အခုဖိုရမ်မှာတော့ ဖိတ်မယ်။ အကုန်လုံးဝိုင်းစဉ်းစားပြီး ဆွေးနွေးကြမှာ ပေါ့။ ဒီဖိုရမ်ကနေတော့ နှုန်းထားတစ်ခုတော့ ထွက်ပေါ်လာမှာပေါ့”ဟု အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးအမျိုးသားကော် မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုး အောင်က ဒီဇင်ဘာ ၇ရက်တွင် ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးမှ အဆိုပြုနှုန်းထားအဖြစ် ကျပ် ၄ဝဝဝ မှ ကျပ် ၆၄ဝဝ အထိ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ် ရေးအမျိုးသားကော်မတီကို တင်ပြထားပြီး ယင်းနှုန်းထားများအပေါ် အခြေခံဆွေးနွေးမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖိုရမ်ပြုလုပ်ပြီးပါက ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ် (သို့မဟုတ်)ဇန်နဝါရီလအတွင်း အမျိုးသားကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ကာ မေလအတွင်း အတည်ပြုထုတ်ပြန်ရန် မှန်းထား ကြောင်းသိရသည်။ အလုပ်သမားများအနေဖြင့်မူ ကျပ် ၅၆ဝဝ နှင့်အထက် သတ်မှတ်ပေးရေးအတွက် တောင်း ဆိုနေကြသလို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များကမူ ကျပ် ၅၆ဝဝ မပေးနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတအထိ စာတင်ထားကြောင်း သိရသည်။
နောက်တစ်ဆင့် တက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ဇောရိုးဇာတ်ကောင် အတိုင်း ရှက်တာဒိုးနက် အသင်းနည်းပြ ဝတ်ဆ
သောင်ရင်းမြစ်ရေ ဒုတိယအကြိမ်မြင့်တက်လာမှုကြောင့် မြဝတီမြို့ အနိမ့်ပိုင်းရပ်ကွက်မှ ပြည်သူများ ရေဘေးရှောင်စခန်းသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေကြရ
မန္တလေး လမ်းလျှောက် သင်္ကြန်တွင် ပြသမည့် ရေစိုခံ ကာတွန်းပြပွဲ အတွက် ကာတွန်း ဆရာများကို စတင် ဖိ??
ကချင် တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူတို့ အခက်အခဲများစွာ ကြုံနေရသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ဆောလ
ငွေရှင်း ဘောက်ချာပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကပ်သော စားသောက်ဆိုင်များကို တိုင်ကြားသူအား ဆု??